Ungayilungisa kanjani i-AirPod Ungaxhumi ku-iPhone? - Ungakwenza Kanjani
Yebo, noma kunjalo ama-AirPod sethulwe cishe iminyaka eyi-4 manje. Kepha bekungekhona kusukela manje lapho bezuze ukuthandwa okunje. Noma ingenye yezesekeli ezincane kunazo zonke, ingamadivayisi we-tech asebenza kahle kakhulu futhi aphezulu, empeleni awekho ngaphezu kwe-AirPods Pro, kepha angabomndeni ofanayo. Yebo-ke! Enye efanayo. Kepha, ngabe ubhekene nezinkinga ngenkathi uxhuma ama-AirPods ne-iPhone? Funda lo mhlahlandlela ogcwele ozokusiza ukuxazulula leli phutha.
Ungalalela umculo, uhambele izingcingo, ufunde imibhalo yakho, ungawaxhuma kwimikhiqizo engeyona yama-apula, uxhume ku-Siri, uthole isipele sebhethri esanele, usebenze ne-Mac ne-Apple Watch, njll.
Noma isebenza kahle kangako, i-tech-savvy, ilula futhi inokwethenjelwa, ama-AirPod akho ayayithola indlela yokukucasula. Akunjalo? Futhi enye yazo ama-AirPod awaxhumi ku-iPhone yakho. Futhi ungazibuza ukuthi njengoba kukhona ‘inkinobho’ eyodwa kuphela ecaleni lokushaja, kuzokusiza ngani? Futhi i-iPhone yakho ayibhangqiwe kuma-AirPods, ngakho-ke i-iPhone izosiza ngani!
Kepha sikholwe, ngaphambi kokuba ulahlekelwe yithemba lakho lonke bese ugijimela esitolo se-Apple njengenketho yakho yokugcina nokuwukuphela kwento ongayisebenzisa, hamba ngalezi zeluleko nama-hacks esiwanikezayo. Futhi siyaqiniseka ukuthi kuzokusiza ukuthi uthokozele ama-AirPod akho futhi.
Imihlahlandlela eminingi kuma-AirPods
Lungisa ikesi le-AirPods elingashaji
I-Apple AirPods Pro vs AirPods 2
Lungisa ama-AirPod angaxhumi ku-iPhone - Izindlela ezi-7
1. Ngabe ama-AirPod akho akhokhiswa ngokwanele?
Izikhathi eziningi, sizama ngokuzumayo ukumatanisa ne-iPhone, futhi sinesifiso sokubhangqa nabo nganoma iyiphi indlela esikhohlwa ngayo iqiniso lokuqala lokuthi bakhishwe ebhethri.Ngakho-ke ngaphambi kokuba weqe isinyathelo esilandelayo qiniseka ukuthi ama-AirPod anebhethri elanele.
Uma kwenzeka ungaqiniseki ngezinga lebhethri lapho kuhlala kukhethwa ukulikhokhisa ngokugcwele.Lapho ama-AirPod akho esesimweni sokushaja futhi isibani sesimo siphenduka siluhlaza, lokho kusho ukuthi ama-AirPod akhokhiswa ngokuphelele.
2. Qiniseka ukuthi i-Bluetooth yakho ivuliwe?
Udinga ukuqinisekisa kabili ukuthi i-Bluetooth yakho ivuliwe, ku-iPhone yakho.Uma usuqinisekile ukuthi i-Bluetooth ivuliwe futhi ama-Airpods awakaxhumi ngaleso sikhathi, ungalandela izinyathelo ezingezansi ukusetha kabusha inqubo.
Chofoza kusethingi ye-iPhone yakho
Chofoza isithonjana esithi “i” eduze kwama-AirPod akho.
Bese uchofoza kunketho ethi 'khohlwa le divayisi' evela lapho
Manje beka ikesi lokushaja ngama-AirPod kulo kude ne-iPhone yakho
Vala isembozo secala lokushaja lama-Airpod imizuzwana engama-30
Manje vula isembozo secala futhi, eduze ne-iPhone.
Ngiyethemba, lokhu kuzolungisa noma isiphi isiphazamisi sesistimu esiphazamisa ukuxhumana futhi ama-AirPod akho azobhangqwa kalula.
3. Setha kabusha ama-AirPod akho
Enye yezindlela ezinhle kakhulu futhi ezivivinyiwe zokuxazulula wonke amaphutha wohlelo amakhulu akhona kuma-AirPod ukuyisetha kabusha ngokuphelele. Manje, lokhu kungabonakala kudida ngoba kunenkinobho eyodwa kuphela etholakalayo, ecaleni lokushaja. Kepha leyo yinkinobho edingekayo kulesi simo.Nakhu ukuthi ungayisetha kanjani kabusha i-AirPod yakho ngokushelela-
Gcina ama-AirPod akho esimeni sokushaja bese ugcina isivalo sivuliwe.
Cindezela inkinobho kusikhwama sokushaja imizuzwana engama-30
Uzothanda ukuthi ukukhanya kwesimo secala manje sekukhanyayo.
Yilapho wazi ukuthi ama-AirPod akho asethwe kabusha.
Lapho ama-AirPod eseqedile ukusetha kabusha, ungawaxhuma ku-iPhone yakho manje.
4. Bheka ukuthi i-iPhone yakho inesoftware edingekayo yini
Udaba lungavela impela uma i-iPhone yakho ingenayo isoftware edingekayo yokubhangqa inguqulo yakho ye-AirPods.
Okulandelayo uhlu lwezinguqulo ze-iOS ezidingekayo ze-iPhone yakho.
Endabeni ye-AirPods Pro - uzodinga i-iOS 13.2 noma kamuva ku-iPhone yakho
Endabeni yama-AirPods (isizukulwane sesibili) - i-iOS 12.2 noma kamuva izodingeka
Endabeni yama-AirPods (isizukulwane sokuqala) - i-iOS 10 noma eyakamuva iyadingeka
Uma ungenazo izinhlobo ze-iOS ezibalulwe ngenhla kudivayisi yakho lapho uhlala unenketho yokuyibuyekeza.Ukuze uvuselele i-iPhone yakho, qiniseka ukuthi idivayisi yakho inebhethri elanele futhi ixhunywe ku-wi-fi> iya kuzilungiselelo> thepha okujwayelekile> chofoza ku-'software update '> thinta ukulanda> ukufaka> uma ubuzwa, faka ikhodi yakho yokudlula.
5. Vala imodi yamandla aphansi
Imodi yamandla aphansi ikhona kuma-iPhones ukuvimbela ileveli yebhethri ukukhipha ngokuqhubekayo. Ivala izinhlelo zokusebenza ezingemuva nokusebenza okubhekele ukusetshenziswa kwebhethri eyeqile.
Iza usizo lapho izinga lamandla lehla futhi siphelelwe amaphuzu wokuxhuma. Kepha lokhu futhi kungaba yisizathu sokukhishwa kwakho kwama-AirPod angaxhumi ku-iPhone. Ngoba njengoba kushiwo imodi yamandla aphansi ivimba ukusebenza okuthile, ngakho-ke kungenzeka kube nokuxhuma kwe-Bluetooth.
Ukucisha imodi yamandla aphansi -
Iya kuzilungiselelo> chofoza ibhethri> cisha imodi yamandla aphansi.
Ungangeza futhi imodi yamandla aphansi esikhungweni sokulawula ukuze ufinyelele kalula -
Iya kuzilungiselelo> isikhungo sokulawula> ngezifiso izilawuli> engeza imodi yamandla aphansi
6. Setha kabusha amasethingi enethiwekhi
Ukusetha kabusha izilungiselelo zenethiwekhi kuzosusa konke okuncamelayo kwezilungiselelo zenethiwekhi. Futhi ungafaka kabusha idatha ye-AirPod ezoqala ukumataniswa kusuka ekuqaleni.Izilungiselelo zenethiwekhi zingasetwa kabusha ngokulandela lezi zinyathelo -
Thepha ku-'setha kabusha izilungiselelo zenethiwekhi '
7. Setha kabusha zonke izilungiselelo ze-iPhone
Uma ngabe lesi sinyathelo esingenhla singasizanga lapho ungasula wonke amasethingi wedivayisi yakho ukususa noma iyiphi i-bug.Indlela enhle, elula ukusetha kabusha wonke amasethingi e-iPhone abe kumodi yefektri.Ungakwenza lokhu ngo,
Chofoza ukusetha kabusha
Khetha 'setha kabusha zonke izilungiselelo'
Siyakuqinisekisa ukuthi lokhu ngeke kususe noma yiluphi uhlobo lwedatha kusuka ku-iPhone yakho. Ngakho-ke lesi sinyathelo siphephe ngokuphelele ukusenza. Izomisa kabusha izilungiselelo njengokuncamelayo kwenethiwekhi, amadivayisi axhunyiwe, kungadingeka ukuthi uphinde ufake ama-password akho e-wifi kepha ngaphandle kwezilungiselelo, idatha kudivayisi yakho ngeke isethwe kabusha nganoma iyiphi indlela
8. Qala kabusha i-iPhone yakho
Yebo, lesi yisinyathelo esihle esiyisisekelo sonke esisenzayo lapho okuthile kungahambi kahle ngamadivayisi wethu. Ngemuva kwalokho kungani ungazami lapha futhiKungahle kube khona i-glitch encane okufanele ivikele ukumataniswa nokuqala kabusha idivayisi yakho izokususa lokho.
Ukuqala kabusha i-iPhone yakho kuyinto eyisisekelo njengale.
Cindezela bese ubamba noma iyiphi yezinkinobho zevolumu ngasikhathi sinye nenkinobho yamandla.
Hudula isilayida ukucisha i-iPhone.
Linda imizuzwana engu-30 ukuze idivayisi yakho icishwe.
Manje ukuvula idivayisi, cindezela bese ubamba inkinobho yamandla uze ubone ilogo ye-Apple esibukweni.
Okwe-iPhone (SE generation), pres bese ubamba inkinobho yamandla kuphela esikhundleni samandla nezinkinobho zevolumu
9. Qiniseka ukuthi ama-AirPod akho ozama ukuwaxhuma kungamadivayisi wakho womsindo oyinhloko
Kungenzeka ukuthi kunamanye amadivayisi axhunywe kwi-iPhone yakho futhi enye yazo ingaba yidivayisi eyinhloko hhayi ama-AirPod akho. Ngakho-ke kungcono ukwenza isiqiniseko sokuthi ama-AirPod okhuluma ngawo lapha yidivayisi yomsindo eyinhloko ye-iPhone yakho.Ungahlala ukubheka lokho kusuka esikhungweni sokulawula.
10. Uma usebenzisa ama-AirPod angewona awe-Apple
Uma usebenzisa ama-AirPods angewona awama-apula, okokuqala kuthiwa awabizwa ngama-AirPods. Ama-AirPod awalona uhlobo kepha yigama i-Apple elinikeze amadivayisi alo endlebe angenantambo.Uma usebenzisa amanye ama-earphone angenankambo yenye inkampani bazobizwa ngamagama abo.Isibonelo, inkampani ye-boAt ibiza umkhiqizo wayo ngokuthi 'ama-Airdopes'.Umsindo uwubize ngokuthi ‘Ama-Air Buds’.
Manje enye inkampani engafakwanga ngama-earphone efihlekile kungenzeka ukuthi yaxhuma esikhathini esedlule kepha ayiqiniseki ukuthi izohlala ixhumana nama-i-devices.Ngakho-ke uma usebenza ne-iPhone, qiniseka ukuthi uzama ukuxhuma ama-AirPods wangempela hhayi ama-buds enye inkampani noma mhlawumbe ukopishe ama-AirPods.
Ngenhla bekunezinyathelo ezilula nezisisekelo ezingakusiza ngenkinga yokuxhuma ye-AirPods.Futhi, ungazama ukuvula nokuvala i-Bluetooth yakho kusuka ku-iPhone yakho izikhathi ezi-5-6 futhi ingaqala ukusebenza futhi.Siyethemba ukuthi esinye salezi zixazululo besizobonakala silusizo enkingeni yakho futhi ama-AirPod akho manje axhuma ku-iPhone yakho, kulungile.Kufanele uhlale ukhetha ukusekelwa yi-Apple uma enye yalezi zinyathelo ezingenhla ingakusizi, ngaphambi kokuzama ukusebenzisa indlela ye-AirPods uwedwa.
Izinhlobo zeRabb.it (2020) - Amawebhusayithi afanayo aphezulu ayi-6
ungathola kanjani umfundi oyinhloko
sakaza ku-tv kusuka kumawindi 10
imibukiso ye-tv ephelele mahhala
amavidiyo we-youtube kuhlelo lokusebenza lwe-mp3
dala i-akhawunti eyinhloko yomfundi we-amazon
ungayinqoba kanjani i-robux yamahhala